ရုပ်ရှင်၊ဗီဒီယိုနှင့် ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲများ ပြန်လည်ရိုက်ကူးခွင့်ပြုပြီ
ရုပ်ရှင် , July 27, 2020
ရုပ်ရှင်၊ဗီဒီယိုနှင့် ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲများ ပြန်လည်ရိုက်ကူးခွင့်ပြုပြီ COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ် ထိန်းချုပ် ကုသရေး အမျိုးသားအဆင့်ကော်မတီက ရုပ်ရှင်၊ဗီဒီယိုနှင့် ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲများ ပြန်လည်ရိုက်ကူးနိုင်ရေးအတွက် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန နှင့် ကျန်းမာရေး နှင့်အားကစား ဝန်ကြီး ဌာနတို့ ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်...
ရုပ်ရှင် , July 26, 2020
ရုပ်ရှင် , July 14, 2020
ရုပ်ရှင် , July 13, 2020
လူရွှင်တော် ဟာသသရုပ်ဆောင် ဦးမန်းဝင်းကွယ်လွန် လူရွှင်တော် ဟာသသရုပ်ဆောင် ဦးမန်းဝင်း ဟာ ဒီကနေ့ ဇူလိုင် ၁၃ရက် မနက် ၆ နာရီခွဲက မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ ပင်လုံဆေးရုံမှာ ကွယ်လွန် သွားပါတယ်။ လူရွှင်တော်ကြီး...
ရုပ်ရှင် , July 11, 2020
အရှင် ကိတ္တိသာရ(သရုပ်ဆောင် ကျော်ဟိန်း) ပျံလွန်တော်မူပြီ မင်းသားကြီး ကျော်ဟိန်း (ခေါ်) အရှင် ကိတ္တိသာရ ဟာ သြစတေးလျနိုင်ငံမှာ ဒီက​နေ့ မနက်ကကွယ်လွန်သွားပြီ လို့သိရပါတယ်။ မင်းသားကြီး ” ကျော်ဟိန်း ”...
သရုပ်ဆောင် မိုးအောင်ရင်အပေါ် စွဲဆိုထားတဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ချစ်သူဟောင်း ခင်မြတ်နိုးက ဘာပြောခဲ့သလဲ
ရုပ်ရှင် , July 08, 2020
သရုပ်ဆောင် မိုးအောင်ရင် အမှုမှာ ပြန်ခေါ်သက်သေ မခင်မြတ်နိုးကို စစ်ဆေး
သရုပ်ဆောင် မိုးအောင်ရင် အမှုမှာ ပြန်ခေါ်သက်သေ မခင်မြတ်နိုးကို စစ်ဆေး ကာမလိမ်လည်မှုဖြင့် တရားစွဲဆို ခံထားရတဲ့ သရုပ်ဆောင် မိုးအောင်ရင် အမှုရဲ့ ၁၆ ကြိမ်မြောက်ရုံးချိန်းကိုဒီကနေ့ ရန်ကင်းမြို့နယ်တရားရုံးမှာစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီကနေ့ တရားခွင်မှာ ပြန်ခေါ်သက်သေ မခင်မြတ်နိုးကို...
ဂဠုန်ဦးစောအဖြစ် သရုပ်ဆောင်ရန် ဆုပန်ထွာ၏ ခင်ပွန်း ဥက္ကာကျော် ကိုရွေးချယ်
ရုပ်ရှင် , July 03, 2020
ဂဠုန်ဦးစောအဖြစ် သရုပ်ဆောင်ရန် ဆုပန်ထွာ၏ ခင်ပွန်း ဥက္ကာကျော် ကိုရွေးချယ် “အောင်ဆန်း” ရုပ်ရှင်တွင် ဂဠုန်ဦးစောအဖြစ် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ရန် ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇွန်လ (၅) ရက်နေ့တွင် ကြေငြာခေါ်ယူခဲ့ရာ Message Box မှသော်လည်းကောင်း၊...
ဒေါင်း ရဲ့ “ထိခတ်သမျှ”
ရုပ်ရှင် , June 13, 2020
“ဒီနေ့ live မလွှင့်ပါခင်ဗျာ ၊ဒီဗီဒီယိုလေးကို ကြည့်ပြီး မိုးရာသီလေးကိုအမှတ်တရ ဖြစ်ပါစေခင်ဗျာ”
မိုးအောင်ရင် ရဲ. ချစ်သူဟောင်း ခင်မြတ်နိုးရဲ. တရားရုံးမှာ ရင်ဖွင့်စကား
ရုပ်ရှင် , May 29, 2020
သရုပ်ဆောင်မိုးအောင်ရင်က ရန်ကင်းမြို့နယ်တရားရုံးမှပုဒ်မ၄၁၇ဖြင့် စွဲချက်တင်အမိန့်အတွက် ပြင်ဆင်ချက်လျှောက်ထားမှုနဲ.ပတ်သက်ပြီးရင်ဖွင့်စကား ပြောလာတဲ့မိုးအောင်ရင်ချစ်သူဟောင် “မခင်မြတ်နိုး”